मंगलबारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने २० काम – LIVE 92 Media
१. मंगलबारको दिन कपाल वा दारी काट्नु हुँदैन । यसो गर्नाले स्वास्थ्य बिग्रने भय रहन्छ ।२. मंगलबारको दिन नङ काट्नु हुँदैन ।३. मंगलबारको पैसाको लेनदेन गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसले धन हानि हुने संभावना रहन्छ ।
४. मंगलबार सकेसम्म घरमा हवन गर्नु हुँदैन । साथै हवन सामाग्री किन्नु पनि हुँदैन ।५. यस दिन सौन्दर्य सामाग्री खरिद गर्नु हुँदैन । अन्यथा वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ ६. मंगलबार दूधका परीकार किन्नु, सेवन गर्नु वा दान गर्नु हुँदैन । भगवानलाई चढाउन भने हुन्छ ।
७. मंगलबार कालो रंगको कपडा धारण गर्नु हुँदैन । रातो रंगको कपडा लगाउनु उत्तम हुन्छ ।८. यस दिन फलामका सामान खरीद गर्नु हुँदैन । यसलाई अशुभ मानिन्छ ।९. मगंलवार ब्रत वस्ने वा दान गर्ने ब्यक्तिले गुलियो परीकार सेवन गर्नु हुँदैन ।
१०. हनुमानको व्रत बस्ने मानिसले दुबै छाक नुनको सेवन गर्नु हुँदैन ।११. मंगलबार घरमा हनुमानको पुजा छ भने घर पूर्णतः शुद्ध राख्नुपर्छ । जुठो र फोहोर हुनुहुँदैन ।१२. मंगलबारको दिन धारिलो बस्तुको खरिद गर्नु हुँदैन । जस्तो चक्कु, छुरी कैचीं ।
१३. मंगलबार भुलेर पनि आमासंग ठुलो स्वरमा कुरा गर्ने वा बहस गर्ने गर्नु हुँदैन ।१४. मंगलबार पशु बलि दिनु हुँदैन । पशुवली दिएमा सन्तानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।१५. मंगलबार कुखुरा वा अन्य पंक्षीको हत्या गर्नु हुँदैन । अन्यथा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुन्छ ।
Previous Article आज अमेरिकी डलरसहित ह्वात्तै घट्यो धेरै देशको विनियमदर
Next Article २५ गते पछि कस्तो हुनेछ लकडाउनको स्वरुप ? यस्तो छ तयारी